Lalao olympika 2012 – Andrasana ny afitsok’ireo solontena malagasy telo mianadahy zokiny - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Lalao olympika 2012 – Andrasana ny afitsok’ireo solontena malagasy telo mianadahy zokiny
Efa tapitra nihintsana avokoa ireo atleta malagasy zandriny teo amin’ny lalao olympika, izay tontosaina any Londres. Mbola manana solontena telo mianadahy tsy niaka-tsehatra i Madagasikara amin’ireo fito mianadahy mandray anjara amin’io lalao avo lenta io. Isan’ireny i Soloniaina Josiane Patricia, izay mpitolona eo amin’ny sokajy latsaky ny 72 kg, sady zokiny indrindra amin’izy ireo. Hamarana ny fiakarana kianja ho an’ny Malagasy izy amin’ny alakamisy 9 aogositra ho avy izao. Raha ny taona dia mety ity no lalao olympika voalohany sady farany atao amin’ny maha atleta azy.
I Saholinirina Eliane, izay mpihazakazaka 1500 m, kosa no hiatrika fifaninanana amin’ny alatsinainy 6 aogositra ho avy izao. Isan’ireo nikatsaka mafy ny tapakila hahafahana mandray anjara amin’ny lalao olympika ihany koa izy, saingy tsy nety nahazo fe-potoana kely indrindra raha tsy efa nikatona ny fisoratana anarana. Tamin’ny alalan’ny fanasana manokana na “Wild Card” no nahafahany nandeha tany Londres . Atleta malagasy mila ravinahitra any amin’ny Club Sottevillais Frantsa izy ary azo heverina ny hahafahany miatrika ny dingana manaraka, raha ny traikefany.
Atleta mpiangaly Décathlon, izay nosoratana anarana amin’ny 110 m misy fefy kosa no atleta lehilahy iray mbola tsy niakatra kianja ho an’i Madagasikara. Tamin’ny alalan’ny fanasana manokana ihany koa no nahafahana nandefa azy ho any Londres na dia voahosotra ho tompondakan’i Afrika teo amin’ny Décathlon aza izy tany Porto-Novo Benin farany teo. Ho azy dia ny hanatsara ny fe-potoana tsara indrindra vitany tany Maorisy, 14’’60, no tanjony. Amin’ny talata 7 aogositra amin’ny 12 ora sy 10 eto Madagasikara no hilahatra eny amin’ny toeram-piaingana izy.
– Mpanazatra 33 mandranto fahaizana eny Carion(0)
Nanomboka omaly ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 8 jona ho avy izao ny fiofanan’ireo mpanazatra mikatsaka ny “Licence B Caf” andiany faharoa, eto Madagasikara. Mahatratra 33 izy ireo ary mitsinjara amina ligim-paritra 14 (Analamanga, Betsiboka, Alaotra Mangoro, Itasy, Sofia, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Andrefana, Bongolava, Analanjirofo, Sava, Menabe, Atsinanana, Diana ary Matsiatra Ambony). Misy ihany
Mpanoratra Rijakely, 03.08.2012, 10:11	FIARAHAMONINA